South Africa: Marikana Miners to Resume Strike? - allAfrica.com
South Africa: Marikana Miners to Resume Strike?
In the aftermath of the Lonmin killings, and as strike action in the platinum and gold sectors threaten to grind the mining sector to a halt, Marikana miners are back where it all begin, writes Greg Marinovich for Daily Maverick.
South Africa: Miners Strike Again After Arrests
Daily Maverick, 19 October 2012
SAPA, 18 October 2012
Some operations were disrupted at Lonmin's platinum mine in Marikana, North West, on Thursday because some workers stayed away, the company said. Read more »
South Africa Appoints Commission to Probe Mine Carnage
President Jacob Zuma has announced the composition and terms of reference of the judicial commission of inquiry into the Marikana tragedy where 34 mine workers were killed and 78 ... Read more »
South Africa: Zuma Appoints Marikana Commission
South Africa: Cabinet Endorses Marikana Commission of Inquiry